​ल्वाङको तेलको फाइदा
ल्वाङको प्रयोग खाना पकाँउदा गरम मसालाको रुपमा, स्वास्थको समस्याको र मुखको गन्ध हटाउनको लागि गरिन्छ । यसको प्रयोग धेरै नै प्रभावकारी र फाइदाजनक हुन्छ ।जुन प्रकारले ल्वाङ मानिसको स्वास्थको लागि उपयोगी हुन्छ त्यस्तै प्रकारले ल्वाङको तेल पनि हामीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरुमा काम लाग्छ ।
​कस्ता खानेकुराले बोसो घटाउँछ ? जान्नुहोस्
हरियो सागपात तथा फलफूल स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । तर ग्रिन टी, ऐसेलु तथा नरिवलको पानी समेत लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि तपाईँहरुले बेवास्ता गरिरहनु भएको हुनसक्छ । उल्लेखित पदार्थहरु शरीरलाई स्वस्थ राख्न र मोटोपना घटाउन उपयोगी हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
​यसरी जोगाउनुहोस् बच्चालाई चिसोबाट
जाडो महिना सुरु हुँदै गएको छ । जाडो महिनामा सुरुसँगै अधिकांश बच्चालाई निमोनिया, घ्यारघ्यार र दमजस्ता समस्या देखापर्न सक्छ । अन्य उमेर समूहभन्दा बच्चाहरूमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ । यो मौसम ब्याक्टेरिया, इन्फ्लुएन्जा र आरएसपी भाइरसका लागि अनुकुल हुनाले बच्चाहरू चाँडै संक्रमित हुन्छन् ।
​दाह्री काटिसकेपछि अनुहारमा लगाउनुहोस् यी चिज
दाह्री काटिसकेपछि केही प्राकृतिक चिज अनुहारमा लगाउनाले अनुहारको छाला मुलायम र चम्किलो बन्न सक्छ । बजारमा पाइने अधिकांश आफ्टरसेभ क्रिममा अल्कोहल हुन्छ, जसले तपाईको छाला बिग्रन सक्छ । यस्ता सामग्रीको प्रयोगले कहिलेकाहीँ साइड इफेक्ट पनि हुन्छ । त्यसैले दाह्री काटिसकेपछि प्राकृतिक चिज लगाउने हो भने....
​हरियो घाँसमा खाली खुट्टा हिड्नुका फाइदाहरु
हाम्रो स्वास्थका हिसाबले बिहान हिड्नु धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । बिहान हिड्ने बानीले हाम्रो शरिर स्वस्थ हुनुका साथै हामीलाई विभिन्न रोगहरुबाट पनि बचाँउछ ।
अझै हामीले बिहान बिहान हरियो घाँसमा खालि खुट्टा हिड्ने गर्यो भने हाम्रो स्वास्थको लागि धेरै नै लाभदायक हुन्छ । मधुमेह....
​एशियन पेन्ट्समा अत्यधिक रसायन प्रयोग
काठमाडौं । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री बितरण भइरहेका अधिकांश रंग(पेन्ट्स)मा अत्यधिक लिड (सिसा) मिसावट भएको सार्वजनिक भएको छ ।
जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र तथा लिडर्स नेपालले काठमाडौं उपत्यकालगायत पश्चिम नेपालका केही बजारबाट संकलन गरिएका १८ रंग उद्योगका ३७ वटा रंगको नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा....
यस्ता छन् बाफ लिनुका फाइदा
दिनभर काम गर्दा पोलुसनका कारण छालामा ब्याक्टोरिया जम्मा हुन थाल्छ । यसलाई टाढा भगाउनका लागि बाफ लिन धेरै राम्रो उपाय मानिन्छ । यसबाट छालामा रहेका पोर्सहरु खुल्छन् र कयौं प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरुबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ । जस्तैः
१. हप्तामा ३/४ पटक तातो बाफ....
​डिप्रेसनको लक्षण र बच्ने उपाय
विश्व स्वास्थ्य संगठनको आंकलनमा सन् २०२० सम्ममा विश्वको लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ, डिप्रेसन । मुटु रोगपछि डिप्रेसन दोस्रो....
​यसकारण खानुहोस् मरिच
जाडो याममा चियामा मरिच राखेर खाने चलन छ । यसरी चियामा राखिने कालो मरिचले न्यानो गराउनुका साथै स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ ।
मरिचको नियमित सेवनले शरीरको मोटोपना नियन्त्रण गरी तौल कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, कब्जियत तथा ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन पनि मरिच....
​यस्ता छन् नरिवलको तेल र कपूरका फाइदा
नरिवलको तेलले छाला र कपालको चमक बढाउँछ र यसमा भएको गुणले चाउरी पर्न दिँदैन ।
अनि पूजाकोठामा हुने कपूरले घरको नकारात्मक ऊर्जालाई बाहिर निकाल्छ अनि अनेकौं रोगको उपचारमा यसको औषधि बनाइन्छ । नरिवलको तेल र कपूर मिसाउँदा यसको असर दुईगुणा बढ्छ । यो मिश्रणबाट....